'Garten', isindululo sokuyila kunye neentyatyambo zalo mzobi ubizwa ngokuba yiLouse | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Izolo besiphambi Isindululo esikhulu sikaMunro sokukhanyisa ngezibane ezingama-50.000 XNUMX que nxiba amanxuwa asentlango e-Australia ukubatshintsha babe yimibono yeqonga ngokungathi bathathwe kwiintsomi.
Kukulo nani likhulu lezibane apho sifumana ukufana nomsebenzi weLouse Law iintyatyambo zayo ezingama-30.000 zixhonyiwe emoyeni ukuzoba imbonakalo yeentyatyambo ezalisa elo gumbi ukulinika lonke ivumba lalo kunye nobuhle balo. Isindululo sobugcisa apho udibaniso lweentyatyambo ezininzi lusikhokelela ekuphefumleni ezinye izivamvo.
Umzobi uRebecca Umthetho weNdlu waziwa ngokufakwa kweentyatyambo ezivele kuyo yonke indawo ukusuka eTimes Square eNew York ukuya kwiZiko leNkcubeko le-Onassis eAthens. Kwi-2014, wabonisa kwiMyuziyam yaseGadini eLondon, apho walungisa iintyatyambo ezingama-4.600 azibeka eluphahleni ngohlobo lokuhlola phakathi kobudlelwane phakathi kweentyatyambo kunye nefashoni. Indalo yamva nje ilandela loo ndlela inye kwindawo yokuthenga ebizwa ngokuba yiBikini eBerlin.
Apho udale ukufakelwa kweentyatyambo ezingaphezu kwama-30.000 ezixhonywe eluphahleni. Isiqwenga sibizwa ngokuba yiGarten Kwaye yenziwe ngeentlobo ngeentlobo zeentyatyambo zeorchid kunye nezinye iintlobo zeentyatyambo. Ngamnye kubo unqunyulwa ngesandla kwaye ubekwe ngocingo lobhedu ukuze uzibeke kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo ukwenza isiphumo esibi.
Ufakelo yintsebenziswano kunye Inyathelo ekuthiwa yiToll yayiyiblumen machen kwaye eyenzelwe ukugubungela ubukhazikhazi kunye nokwahluka kwexesha lentwasahlobo. UGarten ukwamema ababukeli ukuba baqwalasele ubudlelwane phakathi kobuhle obenziwe ngabantu kunye nezinto ezenziwe ngabantu, becebisa ukuba ukuncedisana apho kuya khona.
Ukuba ufuna ukuqhubeka yonke imisebenzi yabo unayo facebook wakho. Umzobi weentyatyambo ufakelo olukhulu loyilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Iintyatyambo ezingama-30.000 zinqunyanyisiwe kwisilingi yale gadi ikhethekileyo
Ubusuku kunye neenqwelomoya zibonisa ubuhle beenqwelo moya nguAzul Obscura